Afganistaan: Madaxweyne Ghani oo Talibaan ugu baaqay wadahadal – Kasmo Newspaper
Afganistaan: Madaxweyne Ghani oo Talibaan ugu baaqay wadahadal
Updated - March 1, 2018 9:45 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Afganistan, Ashraf Ghani, ayaa Arbacadii 28kii Febraayo sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal aan shuruud lahayn in uu la galayo Ururka Talibaan, si loo soo afjaro colaadda dheeraatay ee dalka.
Munaasibadda kulanka 2aad ee ‘Kabul Process for Peace and Securiy’, Ghani wuxuu ka caddeeyay Talibaan, si uu u nqodo urur siyaasadeed oo rasmi ah, in lagu soo daro geeddisocodka nabadda, la’aantoodna aan nabad la gaari karin.
Madaxweynuihu wuxuu soo jeediyay xabbad-joojin, in la sii daayo dhammaan maxaabiista Talibaan iyo abaabulka doorashooyin cusub oo horseedi kara dib u-eegis lagu sameeyo Dastuurka.
Khudbad si weyn looga dhursugayay ayuu, isaga oo Caasimadda kula hadlaya ergada 25ka dal iyo Ururrada Caalamiga ah ee ka soo qaybgashay kulanka Kabuul, ku dhawaaqay :‘Waxaan yaboohaas u samaynaynaa shuruud la’aan, si dhib yari loogu gaaro xal nabadeed ‘ ergada 25ka dal iyo Ururrada Caalamiga ah ee ka soo qaybgashay kulanka Kabuul.
Ghani wuxuu ku boorriyay Talibaan in ay yaboohaas aqbalaan, si loo badbaadiyo dalka, wuxuuna caddeeyay in ‘nabaddu gacantooda ku jirto’.
Si uu u sii dhiirrigaliyo mintidiinta, Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in Xukuumaddu siin doonto dhammaan qoysaska Talibaan baasaboorro iyo Visa, xayiraaddana laga qaadi doono madaxdooda.
Sida wakaaladda Reuters caddeynayso, faallooyinka hoggaamiyaha Afganistaan waxay ka dhiganyihiin isbeddel macna leh oo mowqifkiisii Talibaan, oo horey uu ugu tilmaami jiray argagixiso iyo fallaago.
Soo jeedinta Ghani waxaa la soo gudbiyay maalin ka dib markii Talibaan soo saareen qoraal Maraykanka looga codsanayo in ay u aqbalaan xalka nabadeed sida shacabka Afganistaan u rabaan.